Guddiga Gurmad Qaran oo soo bandhigay tirakoobka dadkii ku waxyeeloobay Xasuuqii Ex Zope ka dhacay”Sawirro” | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Guddiga Gurmad Qaran oo soo bandhigay tirakoobka dadkii ku waxyeeloobay Xasuuqii Ex...
Guddiga Gurmad Qaran oo soo bandhigay tirakoobka dadkii ku waxyeeloobay Xasuuqii Ex Zope ka dhacay”Sawirro”
Guddiga gurmadka Qaran ayaa faahfaahin ka bixiyay waxyaabihii u qabsoomay muddadii ay magacawnaayeen, iyagoo soo bandhigay baaxadda qasaaraha ka dhashay qaraxii Zope.
Shir Jaraa’iid oo guddigaasi maanta ku qabtay Magaaladda Muqdisho ayey ugu horreyn ku soo bandhigeen tirakoobka qasaarihii ka dhashay qaraxii Soobbe ee 14-ki Oktober, iyagoo tilmaamay in 10890 qofood ay ku waxyeelloobeen masiibadaasi.
Guddoomiyaha guddigaasi C/llaahi Maxamed Shirwac oo hadlay ayaa soo hadalqaaday caqabadihii ay lu kulmeen muddadii ay hayeen howsha gurmadka isagoo u mahadceliyay dowladda F. Soomaaliya, maam ulka gobolka Banaadir iyo cidkastoo gacan ka geeysatay taageeradda dadka ku tabaaloobay masiibadii Ex Zope ka dhacday.
Sheekh Nuur Buuruud Gurxad oo isna halkaasi ka hadlay, ayaa si gaar ah ugu mahadceliyay jaaliyadaha Soomaaliyeed ee ku nool dalka dibaddiisa, sida ay u soo garab istaageen dadka dhibaatadu ka soo gaartay qaraxaasi, isagoo tilmaamay in jaaliyaddu muujisay damiir wanaagsan oo ku dhisan waddaniyad iyo isjaceyl, taasoo uu xusay iney dhabbaha u xaareyso midnimo isku duubni Soomaaliyeed, iyo in si isku mid ah looga soo horjeesto cadowga.
Previous articleDood cilmiyeed looga hortagayo fikirka Xagjirka ah oo lagu qabtay Magaaladda Muqdisho
Next articlePuntland oo dowladda dhexe ku warreejisay Askar qeyb ka ah isku dhafka Ciidamada qalabka sida “Sawirro”